Maalinta HIV/ Aids oo laga xusey Minneapolis, SAWIRO – XOGMAAL.COM
Maalinta HIV/ Aids oo laga xusey Minneapolis, SAWIRO
Munaasabad lagu xusey maalinta HIV/AIDS ayaa maanta magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, iyadoo maalintan oo loo asteeyey in la xuso kowda bisha December ee sanadwalba.
Munaasabada ayaa waxa ka soo qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada, mas’uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota, waxgarad iyo culumaa’udiin.
Munaasabada ayaa waxa soo agaasimey wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo hay’adaha ay bahwadaaga kala tahay.
Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud oo ah isku-xiraha wasaarada caafimaadka iyo hay’adaha ay wasaaradu bahwadaaga la tahay, oo munaasabad ka hadlay ayaa sheegay in ay jiraa Soomaali badan oo cudurkan la nool.
Mas’uul ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota, Japhet ayaa sharraxaad ka bixiyey tirade dadka la nool cudurka HIV/Aids ee ay dareelka u bixiyaan iyo dalalka ay asaal ahaan ka soo jeedaan kuwaasoo ka yimd qaarada Afrika, iyadoo dadkan la tiro koobey shanti sano ee ugu dambeysey waxaana hadaladiisii ka mid ah ahaa sidatan.
Dadka ugu badan ee sanadahaasi aannu diiwaangeliney waa dadka ka soo jeeda Liberia waxaan 99, isla sanadahaasi dadka ka yimid Itoobiya waa 47, dadka ka yimid Soomaaliya ee sanadaasi la tiro koobey waa 27, Kenya waa 19, Negeria 15
Dalka Koonfur Afrika 5 qof dalka Suudaana waa 5 qof hadal dalalka kale tiro ahaan ay aad u yarihiin dadka ka yimid ee qaba cudurkaasi.
Masuulka ka socday wasaarada caafimaadka ayaa sidoo kale sheegay in arrinta ugu muhiimsan ee qofku in ay qaado ay tahay tallabooyinka soo socda
Marka koowaad waa in uu qofku iska baaraa cudurka HIV/Aids, taasoo ah marka aad weydo cudurkaasi in aad aad u farxayso
Midda labaad oo ah marka lagaa helo in aadan murugoon ee aad daawada qaadato, maadama aad joogto dal haya daawada ugu wanaagsan adduunka ee cudurka HIV/Aids loo qaato, iyadoo haddii aad daawada u qaadatid sidii loogu talagalay maalinwalba uu feyraska jirkaaga ku jiro uu noqon doono mid aan wax awood ah lahayn oo aad u yar.
Dunida oo dhan ayaa kowda bisha December laga xusaas maalinta adduunka ee HIV/Aids, iyado munaasabadaasi ay ka soo qeyb galaan dadka cudurkan la nool, oo qaarkood aad ugu cawda in si xun loo faquuqo islamarkaasna aysan helin daryeel caafimaad oo ku filin, gaar ahaan dadka ku nool qaarada Afrika.
Erdogan” Kuwii dilay Jamaal Khaashuqji gacanta ha la iisoo galiyo”
Xildhibaan ka hadashay ujeedka ka dambeeya dib u dhaca Doorashada Koofur Galbeed?